Kii galay Rigoorada iyo kii lagu galay oo labaduba hadlay…(Maxay yiraahdeen???) – Gool FM
Kii galay Rigoorada iyo kii lagu galay oo labaduba hadlay…(Maxay yiraahdeen???)
Byare April 12, 2018
(Madrid) 12 Abriil 2018. Rigoore muran badan dhalisay oo daqiiqadii ugu dambeysay lagu abaal mariyay Real Madrid ayaa waxaa lagu reebay camaaliqada Talyaaniga ee Juventus kulankii lugta labaad ee wareegta sideed dhammaadka Champions League.
Medhi Benatia ayaa rigoorada ku galay Lucas Vazquez.
Haddaba labada Laacib ayaa Wararkan kala duwan ka yiri Rigooradii muranka dhalisay:
“Marka gadaal lagaa riixo adigoo ku jira diilinta ganaaxa, shaki kuma jiro inay Rigooro sax ah tahay,” Vazquez ayaa sidaa yiri.
“Waxay ahayd rigoore la dhigay daqiiqadii ugu dambeysay ee ciyaarta, waana wax iska caadi ah inay midaa abuurto dood badan.”.
Medhi Benatia oo isna hadlay markiisa isla markaana sheegay inaysan waxba ka jirin rigoorada loo dhigay Real Madrid ayaa Yiri:
“Waan Murugsanahay, maxaa yeelay waxaan ciyaarnay ciyaartii aan dooneynay, sanadkii tagayna isla tan oo kale ayaa ku dhacday Bayern Munich.
“Real Madrid waa koox wayn, laakiin markasta oo tartan jiro waxay helayaan go’aanka, Ronaldo ayaana dhalinaya.
“Waxaan u dhawaaday Vazquez waxaana helay kubbada. Wuu is tuuray maxaa yeelay ma jirin wax kale uu sameyn karay markaas. Waad arki kartaan lugta ayaan ku taabtay kubbada jihada ayaana ka badelay, inaan ku harno rigoore ceynkaa oo kale ah waa Doqonimo.
“Waxaan nahay dhibanayaasha xaaladan, laakiin aad ayaan ugu faraxsannahay wixii aan sameynay caawa.”.
"Ma Fahmin sababta ay Juventus....".- Ronaldo oo hadlay kaddib ciyaartii waalida ahayd ee Xalay
"War wuxu Bani'aadam ma ahan ee waa Xoolo.".